China Bullet proof Sheet Mugadziri uye Mutengesi | Anteli
Bulletproof inoisa iyo PLA zvigadzirwa zvakakosha kwesainzi chirongwa "Bulletproof huni zvedongo kuvandudza uye kunyorera kutsvagisa", chinangwa ndechekukudziridza yakakwira performance silicon carbide huni zvedongo bulletproof zvinhu, inowedzera mauto edu ega musoja kudzivirira michina nhanho. Chirongwa ichi chakatenderwa zviri pamutemo muna Chikumi 2006. Muna Zvita 2009, bulletproof matanda maceramics akabatanidzwa pamwe chete neInstitute Institute yekumashure kweLogistics Headquarth yePeople's Liberation Army uye kambani yedu yakapedza tekinoroji yekuongorora. Mu2012, yakahwina mubairo wekutanga wemauto sainzi uye Technology kufambira mberi.
Tekinoroji uye hunyanzvi
1.Invented tekinoroji nyowani yekugadzirira silicon carbide ceramics nematanda zvinhu sezvinhu zvakagadzirwa;
2. Kubudirira mune yekugadzirira tekinoroji yeakakura-saizi yakakosha yesilicon carbide arc bulletproof ndiro yekuzadza yekumba gwanza;
3. Silicon carbide huni zvedongo zvedongo bulletproof yekuisa bhodhi inokwanisa kurwisa akawanda kurova;
4. Optimize dhizaini dhizaini yebulletproof plugboard kuti uderedze huremu uye nekuvandudza kuita kwemabara.
Silicon carbide bulletproof zvinhu zvine zvakanakira kurema kurema, kukwirira kuomarara uye kugona kwakanaka kweye ballistic, nezvimwewo chinhu chakanakira kugadzira bulletproof vest, mota, chikepe, helikopta uye dzimwe nhumbi dzekudzivirira.
Yakatangwa muna 2011, kambani yedu ine hupfumi uye hunyanzvi ruzivo mumunda wesilicon carbide chigadzirwa chigadzirwa. Tine akatiwandei ekugadzira mitsara yesilicon carbide ine goho regore remakumi manomwe ematani. Yedu yesilicon carbide zvigadzirwa zvinosangana nedzimwe nyika zvitupa zviyero uye zvakahwina mukubvumirana kurumbidzwa mumusika wepasi rose.
Zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kune dzakawanda dzenyika pasi rese, uye isu tiri kuita kwenguva refu yekudyidzana kudyidzana kumakambani anozivikanwa epasirese epasi rese uye vashandisi vesilicon carbide.
Tine nyanzvi r & D timu, ine simba rekutengesa timu kusangana nezvinodiwa zvevatengi, tichitarisira kushanda newe.
Pashure: silicon carbide inopenya chubhu uye kupisa exahanger
Zvadaro: Burner kamwene
Yakakwira Kuomarara Ceramic Bulletproof Sheet
Yakakwira Kuomarara Silicon Carbide Ceramic Bulletproof Sheet
Nesilicon Carbide Cantilevers Paddle